၃ ရကျအတှငျး မိုးသကျလပွေငျး ကနြိုငျသညျ့ ဒသေမြားစာရငျး – သုတရသ
အထူးကြိုတင်သတိပေးခြင်းရာသီဥတု ကို မည်သူမျှ အစိုးမရပါ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ပင်လယ်ပြင်နှင့် ဒေသအချို့မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်နိုင် 2/3/4. 4.2021 နေ့များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်
ကမ်းနီးကမ်းဝေး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသအချို့အထူးသဖြင့်မြိတ် ထားဝယ် ဒေသများမွန်ပြည်နယ်ဒေသအချို့ အထူးသဖြင့် ရေးမြို့ မော်လမြိုင်မြို့ နှင့်ဒေသအချို့တို့တွင်ထိုရက်များအတွင်း တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်နိုင်ပြီး
လေတိုက်နှုန်းပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးများကို ကြိုတင် သတိပြုနိုင်ရန်အတွက်သာအင်တာနက်များမပြတ်တောက်ခင် ကြိုတင်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လေထုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတော့ပြောင်းလဲခြင်းကို အနီးကပ်ရက်တွေမှာထပ်မံစောင့်ကြည့်ပါမည်။ ထပ်တူစောင့်ကြည့်ကြပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။
#HtayAung #မိုးသက်လေပြင်း #မွန်ကရင်
အထူးကွိုတငျသတိပေးခွငျးရာသီဥတု ကို မညျသူမြှ အစိုးမရပါ မွနျမာနိုငျငံတောငျပိုငျး ပငျလယျပွငျနှငျ့ ဒသေအခြို့မိုးသကျလပွေငျးမြား ကရြောကျနိုငျ 2/3/4. 4.2021 နမြေ့ားအတှငျး မွနျမာနိုငျငံတောငျပိုငျး ကပ်ပလီပငျလယျပွငျ
ကမျးနီးကမျးဝေး တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေအခြို့အထူးသဖွငျ့မွိတျ ထားဝယျ ဒသေမြားမှနျပွညျနယျဒသေအခြို့ အထူးသဖွငျ့ ရေးမွို့ မျောလမွိုငျမွို့ နှငျ့ဒသေအခြို့တို့တှငျထိုရကျမြားအတှငျး တဈခါတဈရံ မိုးသကျလပွေငျးမြားကရြောကျနိုငျပွီး
လတေိုကျနှုနျးပွငျးထနျနိုငျပါတယျ။ သဘာဝဘေးမြားကို ကွိုတငျ သတိပွုနိုငျရနျအတှကျသာအငျတာနကျမြားမပွတျတောကျခငျ ကွိုတငျသတိပေးခွငျးဖွဈပါသညျ။
လထေုပွောငျးလဲခွငျးကွောငျ့ဖွဈလာတော့ပွောငျးလဲခွငျးကို အနီးကပျရကျတှမှောထပျမံစောငျ့ကွညျ့ပါမညျ။ ထပျတူစောငျ့ကွညျ့ကွပါ။ အားလုံးကိုကြေးဇူးပါ။
#HtayAung #မိုးသကျလပွေငျး #မှနျကရငျ
မီးပုံးပြံ ဦးကြျောရငျနှငျ့ မွနျမာတို့ရဲ့ တီထှငျအောငျမွငျမှု နောကျကှယျက လူသိပျမသိတဲ့ သမိုငျးကွောငျး
တရားအားထုတျရငျ စိတျကွညျလငျတယျ အေးခမျြးလာတယျ